Imbwa accessories - Mundo Perros | Imbwa dzepasi rose
Nyika yembwa yakachinja zvakanyanya uye nhasi tave mhando dzese dzezvinhu kuti zuva redu nezuva riite nyore navo. Kwete pasina ishamwari yepamoyo yemunhu, saka anokodzera kutarisirwa kwese kwatinogona kumupa. Tinogona kupatsanura zvishandiso nekushandisa kwatinovapa, kufambisa basa rekuzvinyudza isu munyika inopa zvinhu zvinowanda uye zvakanyanya.
ari accessories inoshandiswa nembwa rinenge nyika rakaparadzana, kwete chete nekuda kweiyo utility kuti izvi zvinotaurwa, asiwo ne kunaka. En Imbwa Nyika isu tichawana yakanakisa ruzivo nezvezvazvino pfungwa mune canine nyaya, kubva mitsipa kana mabhibhi embwa nembwa dzakura, kana kora kana a leash, kushandiswa kwe matomu, malenzi e intraocular emakata, amburera, vanodzosera kana mushonga wemazino, kunyangwe matoyi epabonde embwa.
Sei zvisingaiti kutaura nezvese imbwa zvishongedzo zviripo, isu tichataura nezvevamwe zvichienderana nezvikamu. Kubva pane izvo zvishongedzo zvatinoshandisa zuva nezuva kune izvo zviri zvehutsanana hwako kana izvo zvinotoshamisika uye zvine hunyanzvi.
Zvishongedzo zvezuva nezuva
Zuva nezuva imbwa inosanganisira seti yezvishandiso iyo yakatokosha. Imbwa isati yasvika kumba isu tinofanirwa kunge takave nevashoma kumba vakagadzirira. Saka tinogona kuongorora izvi zvishongedzo kuti zvive zvakajeka nezve izvo zvinodikanwa muzuva nezuva kune imbwa. Kutanga, chimwe chezvinhu zvekutanga ndizvo isa nzvimbo panorara imbwa, yatichazoda a mubhedha wembwa. Parizvino pane akawanda mamodheru. Mibhedha ine machira, leatherette yekuita kuti zvive nyore kuchenesa, nepurasitiki kana wicker shell uye kunyanya iwo mibhedha iyo inogadzirwa nefuro uye yakagadzikana kune imbwa dzese. Tinogona kutenga yakatenderera kana rectangular mibhedha nemibhedha ine maumbirwo epakutanga. Asi pamusoro pezvose isu tinofanirwa kufunga nezve saizi yembwa, kuti mubhedha uve wakasununguka kumukwanira.
Chimwe chinongedzo chavanozoshandisa zuva rega rega vari ari vanopa imbwa uye vanonwa mvura. Kune epurasitiki asi esimbi anogara achikurudzirwa, izvo pasina mubvunzo zvinogara kwenguva refu. Dzimwe dzadzo dzinoita senge dzakakodzera imbwa dzese ndidzo dziinewo chikamu chepurasitiki chisina kutsvedza, zvichitadzisa imbwa kudhonza iyo inodyisa ichidya kana kunwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kuwana zvimwe zvakaomesesa zvinhu, senge zvinodyisa zvinopa chikafu sezvazvinodiwa, asi izvi zvinoshandiswa chete kana tikasiya imbwa iri yoga kwenguva yakareba.
Kune rimwe divi, kufamba kwakakosha kune imbwa, saka isu tichafanirwa kudaro tenga leash yake uye kora kana tambo kuti umutore kufamba. Panguva ino nyika yese yemikana inovhura pamberi pedu. Chinhu chakakosha kutenga chishongo chembwa kuti inokodzera saizi yayo kuti isatize, kuti igadzikane uye kuti yakasimba kana imbwa ikadhonza uye yakakura, kuti isatsemuka. Zvirinani kudzivisa zvakashata zvemhando yakasungira iyo inogona kutipa isu kunyanya kutya. Sungai dzave kunyanya kufarirwa asi hadzikurudzirwe kana imbwa iri kudhonza zvakanyanya, nekuti haimunonokere zvakanyanya kana uchidhonza nemuviri wese uye kwete chete nemutsipa, sekunge neleash. Mukubatana netambo, isu tichazodawo mabhegi etsvina ane mubati webhegi, ayo nhasi ari nyore kuwana.
ari matoyi ariwo chikamu chehupenyu hwembwa hwezuva nezuva, saka tinogona kukutengerai mamwe. Kune mhando zhinji, kubva matoyi akapfava embwa diki matoyi netambo kana mabhora akaomarara. Izvo zvinonyanya kutsvakwa ndezve matoyi anoviga mibairo mukati uye anovabvumidza kuvaraidzwa kwenguva refu.
Patinoenda parwendo nechipfuwo tinogara tichifanira kuwedzera zvimwe zvinhu zvinonyanya kubatsira. Mumwe wavo ndiye anotakura. Isu takatokuudza nezvemhando dze imbwa dzinotakura, saka munhu wega wega anofanira kusarudza iyo inonyanya kukodzera chipfuwo chavo, ingava bhegi, bhegi kana bhegi resimbi. Munzvimbo zhinji zvinototarisirwa kuti uzvitakure, saka tichazoda imwe kana tichida kutenderera pasirese nembwa.
La kuvhara zvigaro zvemotokari Icho chimwe chigadzirwa chikuru icho munhu wese ane mhuka anofanira kutenga. Chakafukidza chigaro icho chinobatsira kudzivirira kuve nekuchenesa mota kwemaawa mushure mekutora imbwa, kunyanya kana iri kudurura bvudzi rakawanda. Izvo zvakanaka, zviri nyore kuisa uye zvinodzivirira izvo, kunyange kana imbwa ikarutsa. Chaizvoizvo chigadzirwa.
Nyika ye mbatya dzembwa Izvo zvakare zvinogadzira iyo yakazara kwazvo posvo. Parizvino tinowana mhando yemhando imbwa mbatya, senge majasi emvura kunodzivirira kubva kumvura kana mbatya dzinodziya kune imbwa dzine hura hushoma. Asi pane zvakare tsika yekushandisa mbatya mbichana nekuti iri mufashoni, kunyanya mumhando diki dzinozvikweretesa ivo kumagadzirirwo akanaka. Zvakajairika kuona imbwa shangu, kunyangwe mune imbwa dzinofamba muchando ivo vanofanirwa kuchengetedza mapedhi avo.
Utsanana hwembwa hwakakosha, saka isu tinofanirwa zvakare kufunga nezve izvo zvishandiso zviri pamusika. Imwe yezvakanyanya kukosha ichave mizinga yembwa. Zvichienderana nerudzi rwebvudzi rauinaro, tinofanira kutenga rimwe kana rimwe racho. Iko kune akakosha mabrashi eakave-maviri-akatetepa emvere, kune refu, rakamonana kana rakakora bvudzi. Kune zvakare zvishongedzo zvinofambisa iri basa kana imbwa yedu iine pfupi uye yakajairwa bvudzi, senge mittens yekukama iwo.
Kana tiri mumwe wevaya tinoda kugadzira vhudzi kumba kuchengetedza zvishoma, tinogona kutenga Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.. Iwo akakwana kwazvo, nemuchina, chigero uye misoro yakasiyana. Naizvozvi isu tinogona kuve stylists embwa dzedu pachedu.
Pakati pezvinhu zvehutsanana tinogona kuwana zvimwe zvinhu zvakawanda, senge mazino ekuchenesa kit. Aya marudzi ezvinhu anogona kuita kuti hupenyu huve nyore kwatiri nemhuka yedu uye anotibatsirawo kushanyira vet kushoma, sezvo tichizochengeta meno avo mune akakwana mamiriro.
Zvinoshamisa imbwa zvishongedzo
Izvo zvishandiso zviripo nhasi zvinogona kuvhara nhamba hombe yezvinodiwa. Kana isu tikatarisa online zvitoro tichawana zvinonakidza zvinhu. Semuenzaniso, unogona kutenga un agility chishongedzo imbwa yako kutanga kudzidzira mumutambo uyu, kana kungofara.
Mabhora embwa, akanakisa kushamwari yako yepamoyo
kubudikidza Nat Cherry inoita 2 mazuva .
Mabhora embwa chinhu chisingaparadzaniswi chemhuka idzi: kangani isu tisina kuvaona mumafirimu ...
Moisturizing imbwa cream yemakumbo nemhino
kubudikidza Nat Cherry inoita Mavhiki e2 .
Kunyangwe zvingaite kunge zvakapusa, moisturizing cream yembwa yakakosha kuchengetedza ganda remhuka yedu ...
imbwa mazino bhurasho
kubudikidza Nat Cherry inoita Mavhiki e3 .
Mabhurashi emazino embwa ndiyo imwe yenzira dzekuchengetedza hutsanana hwemazino emhuka yedu ne…
Iyo yakanakisa imbwa poop scoopers yemarudzi ese
kubudikidza Nat Cherry inoita 1 mwedzi .
Imbwa poop scoopers inowanzo kupatsanurwa kuita mhando mbiri, zvichienderana nekuti idiki kana yakakura, asi…
Magumbeze embwa haangozadzise basa rawo sevanodzivirira sofa kana kugadzira mubhedha we…
kubudikidza Nat Cherry inoita 3 mwedzi .
Zvekudya zvembwa ndezvekuti, mushure mekudya kwatinopa chipfuyo chedu zuva nezuva, chikamu chetsika ...
Mabhandi ezvigaro embwa anofanirwa kana uchitora imbwa yedu nesu...
Imbwa underpads ine maviri makuru mabasa (anonyanya kushandiswa kuita pee kana poop) uye anobatsira ku…
kubudikidza Nat Cherry inoita 4 mwedzi .
Kune mafani emabhasikoro uye ecology, bhasikoro tswanda yembwa inogona kuve sarudzo huru…
Tambo dzekuti imbwa dzirumwe ndeimwe yematoyi anonyanyozivikanwa kurovedza muviri imbwa yako ku...
Kune kuwedzera uye kuwedzera kuziva nezvenyaya yezvakatipoteredza, uye pamwe ndosaka zviri kuwedzera…
Chii chinonzi pipette uye ndeyei?